IBirch Haven-iNdawo eNtofontofo kwiChibi leHorsefly - I-Airbnb
IBirch Haven-iNdawo eNtofontofo kwiChibi leHorsefly
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRemco & Erin
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uRemco & Erin iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Relax e-Birch Haven, indlwana etofotofo ephambi kwechibi kwi-Horsefly Lake, eBritish Columbia (BC) enika usapho lwakho kunye nabahlobo amava amnandi naphumlayo eholide. Ilanga lincamisa ngeentsuku libalele kwidokhi elidityaniswe nokuqubha ngokuzolileyo kumanzi apholileyo, acwengileyo. Kubekho impepho epholileyo ephuma echibini. Ubusuku obufudumeleyo obukhanyiswe yinyanga kunye neenkampani ezilungileyo ecaleni kokukhanya komlilo. Iintlobo ngeentlobo zemisebenzi yangaphandle kwibala lokudlala lendalo. Kwaye ekupheleni kosuku, zingene kwi-downy intuthuzelo kwaye ukhukuliseke.
Yonwabele iBirch Haven-indawo entle, ebekwe kakuhle phambi kwechibi kwichibi leHorsefly. Ngokumalunga ne-1, 150 sq yeenyawo zendawo yokuhlala evulekileyo kubandakanya ikhitshi egcwele ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela eli-2 eligcweleyo. Indawo yokuhlala evulekileyo ekhanyayo enembono entle yechibi. Amagumbi amabini okulala. Ulala 6 kamnandi. Igumbi lokulala elongezelelweyo leendwendwe ezi-4 ezifumanekayo xa uceliwe. I-sundeck enkulu enefenitshala yangaphandle, ifriji encinci kunye nomgodi womlilo zonke kunxweme lwechibi. Idokhi yabucala yokubopha isikhephe sakho emva kokusungulwa ngokulula kwiPaki yePhondo kanye ngaphesheya kwechibi. I-220 ft yommandla wabucala wamanzi kunye nolwandle oluthambekileyo oluthambekileyo. Iyadi enkulu eneendawo ezintle zokudlala. Iwasha, isomisi, imicrowave kunye neWiFi. Ixhotywe ngokupheleleyo, iilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe.
I-Horsefly Lake yi-55 km ubude bechibi eliyintlango ebekwe kwingingqi yeCariboo yaseBritish Columbia, eCanada kwaye ime malunga neekhilomitha ezingama-80 ukusuka eWilliams Lake, eBritish Columbia kwaye malunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka kwilali eyimbali yeGold Rush yaseHorsefly (abemi abayi-1000). Ichibi kunye nommandla ojikelezileyo zibonelela ngezinto ezininzi ezibandakanya ukuloba, ukukhwela isikhephe, ukuhamba ngesikhephe, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukuqubha, imidlalo yasemanzini, ukubona indawo, ukuzingela, ukutyibilika ekhephini, kunye nokuhamba ngekhephu, kunye nesibheno sokuyila esifana nobuGcisa kwiFly (umculo, umdaniso). kunye nomnyhadala wobugcisa) ngoJulayi.
Umbuki zindwendwe ngu- Remco & Erin
Unokusetyenziswa NGOKUPHELELEYO kwepropathi yeehektare ezi-2.54 enomda kumhlaba wesithsaba kumacala amabini. Abamkeli bakho baphantsi kwendlela, ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na.
Ubuncinci ubusuku obuthathu ngexesha lekwindla, eBusika kunye neNtwasahlobo
Irenti zeveki kuphela ngexesha leHlobo: ngoMgqibelo ukuya ngoMgqibelo
Amaxabiso asekelwe kwiindwendwe ezi-4
Iindwendwe ezongezelelweyo $20 / ubusuku / umntu
Abantwana abaneminyaka emi-5 ubudala kwaye akukho ntlawulo
Unokusetyenziswa NGOKUPHELELEYO kwepropathi yeehektare ezi-2.54 enomda kumhlaba wesithsaba kumacala amabini. Abamkeli bakho baphantsi kwendlela, ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$387